कुन राशिलाई कस्तो सासु पर्छ ? राशि अनुसार सासुसँगको सम्बन्ध हेर्नुहोस् ! – Ramailo Sandesh
कुन राशिलाई कस्तो सासु पर्छ ? राशि अनुसार सासुसँगको सम्बन्ध हेर्नुहोस् !
विवाहलाई लिएर हरेक छोरि मान्छेलाई कौतुहलता रहने गर्दछ। साथै छोरि मान्छेको आफ्नो-आफ्नो चाहना साथै धारणा रहने गर्दछ। आफ्नो सपनको राजकुमार मिलोस भन्ने सबै युवतीहरुको चाहना रहने गर्छ। विवाह भनेको दुई व्यक्तिको मिलन मात्र नभैकन दुई परिवारको मिल्नलाई मान्ने गरिन्छ। अपरिचित परिवार समेत पनि विवाहबाट नयाँ सम्बन्धमा गास्नको लागि विवाहले मद्दत गर्ने गर्छ। ज्योतिष शास्त्रमा हरेक व्यक्तिको भविष्य कस्तो रहने बारे अड्कल लगाउने गरिन्छ भने विवाहको सम्बन्धमा पनि राशी अनुसारको वैवहारिक सम्बन्ध साथै परिवाको निर्धारण रहने गर्दछ। राशी अनुसारको फल मिल्ने हुँदा कुन राशी भएका युवतीलाई कस्तो व्यवहार भएकी सासु मिल्छ भन्ने कुरा निम्न उल्लेखित रहेको छ।
यस राशी हुनेहरुको सासु तेज स्वभावका रहने गर्छन। यस राशिका व्यक्तिको सासु कडा स्वभावका कारण घरमा खासै शान्त वातावरण रहन गार्हो हुने गर्छ। मेष राशिका युवतीहरुको सासुसँगको सम्बन्ध खासै राम्रो हुन गार्है रहने गर्छ।
वृष राशी हुनेहरुको सासुसंगको सम्बन्धमा सधैँ उतार-चडाब रहने गर्छ। यस राशी हुनेहरुको सासुबाट कहिले माया मिल्नेछ भने कहिले दुख मिल्न सक्ला। यस राशी हुनेहरुको सासुसँगको तालमेल मध्यम रहने गर्छ।
मिथुन राशी हुनेहरुले चाहे अनुरुपको सासु मिल्ने गर्छ। यस राशिको सासुसँगको सम्बन्ध धेरैनै सन्तुलित रहने गर्छ। साथै सासु-बुहारीमा राम्रै ताल-मेल बन्ने गर्छ। तर विचारधारामा भने खासै मेल नहुने हुन्छ।
कर्कट राशी हुनेहरुको सासुसँग प्रतिष्पर्धा हुने गर्छ भने यस राशिका सासु सुन्दरताको मामलामा घमण्डी रहने गर्छन। जसका कारण सम्बन्ध बिग्रने गर्छ। परिवारको मामलामा एकरुपता हुन सके पनि आन्तरिक रुपमा भने यस राशी हुनेहरुको सासुसँगको सम्बन्ध खासै राम्रो रहदैन।
सिंह राशि राशी हुनेहरुको सासु शान्त स्वभावका पर्ने गर्छन्। शान्त रहने भएता पनि सानो-सानो कुरामा बुहारीसँग रिसाउन भने सक्छन। यस राशी हुनेहरुको सासुसँगको सम्बन्ध सामान्यनै रहने गर्छ।
कन्या राशिको लाही आफ्नो सासुसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन गार्हो पर्ने हुन्छ। बुद्धिमानिको मामलामा प्रतिष्पर्धा रहने हुँदा प्राय मन-मुटाबबाट सम्बन्ध गुज्रने हुन्छ। तर बाहिरी मामलामा भने कन्या राशिलाई आफ्नो सासुबाट राम्रै साथ मिल्न सक्छ।
तला राशिको सासु खासै दुख दिन नचाहने पर्ने गर्छन् भने खासै नचाहिने कुरामा रिष नराख्ने हुँदा सम्बन्ध सामान्यनै रहने गर्छ। आफु पनि स्वतन्त्र रहन रुचाउने हुँदा तुला राशिको सासुले खासै तनाव नदिने गर्छन्। तर पारिवारिक मामलामा भने यस राशिको सासु अलि कडा रहने गर्छन।
वृश्चिक राशि राशिका व्यक्तिको सासु कडा स्वभावका पर्ने गर्छन्। घर-परिवारमा आफ्नो राज चल्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने सासु पर्ने हुँदा यस राशिको सम्बन्ध सासुसँग खासै राम्रो नहुने गर्छ। सासु आफ्नो गृहस्थलमा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन नचाहने हुँदा यस राशिको व्यक्ति आफ्नो सासुसँग संयम रहनु पर्ने हुन्छ।
धनु राशीलाई धेरै माया गर्ने सासु पर्ने गर्छन्। आफ्नो छोरि भन्दा पनि नजिकको सोच्ने हुँदा यस राशिलाई धेरै इज्जत पनि दिने सासु पर्ने गर्छन्। तर जिम्मेवारीको मामलामा भने धनु राशीलाई शान्त सासु मिल्न गार्हो पर्ने गर्छन्। माया गर्ने भए पनि गल्ति भने खासै मन नपराउने सासु मिल्ने गर्छन् धनु राशीलाई।
मकर राशि राशी हुनेहरुको सासु ठिकै रुष्ठ मिल्ने गर्छन्। खासै दुख दिन नचाहने भएता पनि अल्छी बुहारी मन नपराउने हुँदा यस राशिका व्यक्तिहरु आफ्नो सासुसँग छुट्टै तरिकाबाट प्रस्तुत हुनु पर्ने हुन्छ। सासु पनि सम्बन्ध राम्रो बनाउने भएता पनि धनको मामलामा भने सम्बन्ध बिग्रन सक्ने हुन्छ।
कुम्भ राशि हुनेहरुको सासु राजनीतिज्ञ मिल्ने हुँदा सजक रहनु पर्ने हुन्छ। चतुर तरिकाको सासु मिल्ने हुँदा यस राशिको सासुबाट दुख खेप्नु पर्ने हुन्छ। हत्तपत्त सम्बन्ध नबिग्रिने भए पनि सम्बन्ध बिग्रिएमा कुम्भ राशिको आफ्नो सासुसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न गार्हो पर्ने गर्छ।
मीन राशिको आफ्नो सासुसँगको सम्बन्ध धेरै राम्रो रहने गर्छन्। यस राशिलाई आफ्नो सासु कि त धेरै राम्रो पर्ने गर्छ,कि धेरै रिस गर्ने पर्ने गर्छन्। यस राशि आफ्नो सासुको सामु खासै नबस्ने हुँदा सम्बन्ध नबिग्रिने गर्छ।
शरीरमा भिटामिन के को कमी भएमा देखिन्छन् यस्ता समस्या, यी संकेत देखिए रहनुहोस् साव धान !
भारतमा एकै दिन करिब ३ लाख संक्रमित, २ हजार २० जनाको मृ’त्यु…